Madagasikara: Manova olona ny mipetraka Andafy · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 13 Septambra 2008 6:55 GMT
Vakio amin'ny teny Español, Français, 繁體中文, 简体中文, Swahili, English
Tamin'ny lahatsoratra nivoaka tamin'ny volana Marsa no nanoratan'ny mpahay toekarena William Easterly sy Yaw Nyarko izay nanamarika fa mahatratra 81 isanjaton'ny vola raisin'ny olona mipetraka amin'ny firenena iray Afrikana atsimon'i Sahara ny vola fandefan'ireo nifindra monina.Efa niadian-kevitra tanatin'ny tontolom-bolongana Malagasy ihany koa tany aloha tany ny anjara toeran'ireo Malagasy any ampielezana amin'ny fampandrosoana an'i Madagasikara . Vao niadian'ny mpamaham-bolongana hevitra ihany koa ny fiovan'ny fihetsiky ny Malagasy miaina any Andafy sy ny fahasimban'ny fifandraisan'izy ireny amin'ny tapaka sy ny namana eto an-toerana.
News2dago no mitantara ny fitotongan'ny fifandraisana ananany tamin'ny namana tena akaiky azy tany ampianarana satria nifindra nankany Firantsa io namany io:
Nampian'i News2dago moa fa afaka nianatra ho any Firantsa ihany koa ny tenany tamin'ny taona 2005 fa rehefa nieritreritra lalina izy dia naleony ihany nijanona. Nambarany ary ny antony: Very be dia be ny fifaneraserana any Firantsa, samy maka ho azy ny olona any, tsy misy namana ilalaovana belaoty intsony, naleony nananganany tetikasa teto an-toerana ihany ny vola tokony nandehanana tany. “Izay no tsara kokoa toy izay tahaka an-dry zalahy manana dipilaoma maro dia maro.”
Hoy manko izy:
Mifandraika amin'izany ihany dia nolazain'i news2dago fa nisy zanaky ny mpiray tampo taminy vavy iray nitodi-doha teto Madagasikara fa hatao mariazy amin'ny namany izay Malagasy ihany koa nifanena taminy tany. Efa niomanany avokoa ny zava-drehetra, hatramin'ny nitondra mpaka sary matihanina avy any Firantsa. Niangavy ny hampiasa ny aterinetony tao an-tranony izy ireo hikarakaran'izy ireo ny fiovana rivotra nankany Mahajangà, ary dia tsy nandalo nanao veloma akory izy ireo rehefa niverina nankany Firantsa indray. Tena manova olona tokoa ny miaina any andafy.
Raha namaly ity tantara ity moa Ravatorano dia nilaza fa tsy ny mpiray firenena monina any andafy ihany no manana izany tsy firaharahiana na mody fanina amin'ny namana izany. Na izany aza dia nolazainy fa fanajana kely indrindra ny manaja ny olona izay nanampy anao. Namazivazy i Simp hoe: ” Mamindrà fo azy fa olombelona ihany izy… Ny soa atao levenambola hoy izy ary ny ratsy atao loza mihantona.”
lehilahytsyresy indray no manome ny anton'izay mety hanadinoana ilay fisakaizana akaiky izay (mg):
Tsy hoe ratsy ny te-hovoatra mba hianatra any andafin’ny riaka saingy betsaka loatra ny zava-manahirana.
Ka manaiky ny hevitr’i News2dago aho : tsy voatery ho tsara ny mankany…
Ny tena mampalahelo dia ny vola heri-po lany niaingana tety nefa ahatongavana amin’izany toe-tsaina izany…
Mety hanampy amin’ny tolo-kevitra ihany koa : http://autrement.page.mg/2008/08/etudier-a-letranger/
Misaotra amin’ny asa vita e !
19 Septambra 2008, 09:03
Indrisy mantsy fa tena marina izany lazainareo izany, kanefa tsy azo atao “cas général” kosa angamba io e!
Izaho mipetraka aty Paris, 17taona aho, vao afaca bacc teo, voatery nilaozako ny namana sy tapaka ary ny havana, kanefa aho tsy manadino izany.
Vao maika aza mahatsiaro, mandefa taratsay, imailaka, sms, dia miandry valiny.
Ny faniriana moa dia ny ihaonana indray rehefa vita ny atao aty (fianarana).
Ka tsy milaza aho hoe toa ahy daholo ny olona aty, fa aoka kosa tsy ho everina hoe “mpanadino” sy “tia tena” daholo ny any andafy ny riaka e!
Na dia izany aza dia itako fa betsaka tokoa ny olona tsy dia miraharaha ny misy any dago aty e…personnellement je ne les comprends pas.
Fa zay no zava misy, indrisy mantsy, ka akory atao!
21 Novambra 2008, 20:20
Mivoaka matetika aho nanomboka 2006,
fa miverina any an-tanana, koa
Misy antony isan-karazany mila jerena,
Ny fifandraisana aloha dia ifamalian’ny olona roa,
mety hoe mandefa e-mail ny any @ tanana fa tsy mamaly ny any ivelany
fa mety koa tsy mandefa e-mail na taratasy ny any an-tanana noho ny antony isan-karazany, de lasa tsy dia mazoto koa le aty ivelany.
Misy fiantraikany be amin’ny fomba ifandraisana koa ny antony nialanao tany an-tanana, ohatra hoe tena te hitsaoka ny hamafin’ny fiainana, izay tsy hanomezan-tsiny, hany ka mieritreritra hoe “traumatise” rehefa mifandray amin’ny any an-tanana.
Marina aloha fa mampiova ny aty, fa miankina amin’ny olona tsirairay.
Betsaka ny mihevitra fa ny an-dafy de ohatran’ny @ film, ka tsara daholo ny aty, fa rehefa aty ianao de misy mpangataka eny @ trotoir, maloto koa ny tanana @ faritra be mponina, sns, … fa tsy paradisa akory aty.
Tany Amerika aho t@ 2007, fotoana voalohany io, misy aloha tsara, fa misy koa tena faritra mahantra. Nahita gasy roa aho tany, nifampijery fa rehefa avy eo dia mody fanina. Za koa moa lehilahy ary ny gasy hitako vehivavy ka toa sarotra ny hanantona sy hanontany, fa ny fantatro de gasy ireo fa tsy te hifandray, asa angaha hoe maninona.
Manampy kokoa angamba raha ny fijeriko azy ny mody matetitetika,
izaho aloha tsy hijanona ela aty fa hiverina,
ny ato anatiko de mieritreritra foana hoe : “rahoviana any @ tanana no ho toy izao?” indrindra rehefa mahita zavatra tsara.
Raha azo atao de mitondra mody tsikelikely ny zavatra tsara azo ianarana.
Zagasy ary “fier” fa gasy, fier positif fa tsy mirehareha negatif.
Misaotra an’Andriamanitra fa gasy no nanaovany ahy.
Milay ny gasy ary manan-talenta, sady matsilo saina.
Variana ny oloha mahita ny talenta raha mozika no resahina, fa gaga koa ny olona mahita fa mahay miteny fitenim-pirenena maro ny olona.
Aza manome tsiny ny gasy niova fa ampio izy ireo hifandray aminao na dia toa variana sy tsy mamaly aza satria mandeha haingana be ny fiainana sady samy manao izay maha mety ny fiainany ny olona aty an-dafy, mahaleo tena,…
Mila miova koa aloha ny saina mba tsy hanilika ny faka na ny fiaviantsika,
GASY tsy ho tonga vazaha mihintsy na mipetraka aty mandrakizay aza.
Mila miezaka koa ny gasy any an-tanana, mba hiantso telephone, sms, mailaka, taratasy sns,…
25 Novambra 2008, 12:14